प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ज’टिल ! – Life Nepali
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ज’टिल !
काठमाडौँ। मि’र्गौलाले काम नगरेर डायलाइसिस गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एपेन्डिसाइटिसले सताएको छ। सोमबार रातिदेखि पे’ट दु’खेर पखाला पनि लागेपछि मंगलबार बिहान उनी उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए। मि’र्गौलाले काम गर्न छाडेपछि ग्राण्डी अस्पतालमा तीन पटक डायलाइसिस गराइसकेका प्रधानमन्त्री ओली नि’यमित विशेषज्ञ चिकित्सकको सचेत निगरानीमा रहेका ओलीको स्वा’स्थ्यमा अचानक यो समश्या देखिएको हो।
मि’र्गौलाले दु’स्ख दिइरहेको अवस्थामा सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीले अर्को जटिल स’मस्याको सामना गर्नुपरेको छ। एपेन्डिसाइटिस फु’टेर पे’टमा सं’क्रमण भएपछि चिकित्सकहरुले जोखिम मोलेर श’ल्यक्रि’या गरेका छन्। स्वा’स्थ्यमा स’मस्या आएपछि उनलाई बिहान ९ बजे मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रा’न्सप्लान्ट से’न्टरमा र्पुयाइएको थियो।
परीक्षणपछि डाक्टरहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एपेन्डिसाइटिससहित पेरिटोनाइटिस भएको नि’र्क्यौल निकालेपछि तत्कालै अ’परेशन गर्ने निर्णयमा पुगे। एपेन्डिक्स सुन्निएर पाकेर भित्रै फुट्नाले सं’क्रमण भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। ओलीका निजी चिकित्सकसमेत रहेका डा. अरुण सायमीले एपेन्डिक्स सुन्निएर पिप जमेपछि समयमा श’ल्यक्रि’या नहुँदा भित्रै फु’टेर सं’क्र’मण भएको बताए।
जसलाई मेडिकल भाषामा एपेन्डिसाइटिससहित पेरिटोनाइटिस भन्ने गरिन्छ। अहिले श’ल्यक्रिया सफल भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्सकको कडा निगरानीमा राखिएको छ। अस्पताल परिसरमा उनको स्वास्थ्यको चासो राख्नेको भीड लागेपनि कसैलाई भेट्न दिएको छैन। एपेन्डिक्स सुन्निएर एपेन्डिसाइटिस भएपछि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ट सर्जन डाक्टर रमेशसिंह भण्डारीसहितको टोलीले अपरेशन गरेको थियो।
एपेन्डिसाइटिसको ग’म्भीर अवस्थालाई पेरिटोनाइटिस एपेन्डिसाइटिस् भन्ने गरिन्छ। चिकित्सकका अनुसार सामान्य अवस्थामा एपेन्डिसाइटिस भएमा तत्काल अपरेशन नगरेमा ठूलो स’मस्या बन्छ। समयमै अपरेशन नगरेर एपेन्डिक्स फुटेर शरीरमा संक्रमण फैलिनु गम्भीर अवस्था हो।
स्व’स्थ मानिसका लागि पनि एपेन्डिसाइटिस पाकेर पि’प निस्की पेटमा फैलिनु एकदम जटिल संक्रमण मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा शरीरका अन्य अंगमा समेत प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेर डायलासिसमा गएका प्रमका लागि झन् यो अवस्था जोखिमपुर्ण रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। ट्रान्सप्लान्ट गरेका बिरामीले प्रतिरक्षात्मक क्षमता घटाउने औषधि खाइरहेको हुनाले संक्रमणको खतरा सामान्य मानिसमा भन्दा निकै बढी हुन्छ ।
सामान्यतः भोक नलाग्ने, रिंगटा लाग्ने र हल्का दुखिरहेको पेट एक्कासि क्षणभरमै सहनै नसकिने गरि दु’ख्न थाल्नु पेरिटोनाइटिसका लक्षण हुन् । पेरिटोनाइटिसले पेट दु’ख्दा हलचल गर्न पनि असहज हुने गर्छ। पेरिटोनाइटिस दुई प्रकारका हुन्छन्। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस र सेकेन्डरी पेरिटोनाइटिस ।
प्राइमरी पेरिटोनाइटिस भनेको सीधै पेरिटोनियममा इन्फेक्सन हुनु हो भने पेटका अन्य अं’गमा इन्फेक्सन हुँदा त्यसका जी’वाणुहरू पेरिटोनियमसम्म पुगेर त्यहाँ इन्फेक्सन हुनु सेकेन्डरी पेरिटोनाइटिस हो । यदि पेरिटोनाइटिससँगै सिरोसिस पनि भएको अवस्थामा ४० प्रतिशत बि’रामीको मृ’त्यु भएको त’थ्यांक छ।
यस्तै, सेकेन्डरी पेरिटोनाइटिस भएका १० प्रतिशत बि’रामीको मृ’त्यु भएको तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको पेरिटोनाइटिस उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिसका का’रण भएको हुनसक्छ। डायलाइसिस र मि’र्गौला प्रत्यारोपण प्राइमरी पेरिटोनाइटिसको मुख्य का’रणमध्येमा पर्छ भने यस्ता वि’रामीलाई यो घा’तक पनि हुन्छ।
मि’र्गौलाले काम नगर्ने व्यक्तिको र’गतमा भएका विकार बाहिर निकाल्न ‘क्याथेटर’ शरीरमा राखिन्छ। ‘क्याथेटर’ भनेको विकार बाहिर निकाल्न पेरिटोनियममा राखिने एक प्रकारको नली हो। क्याथेटर पेरिटोनियममा राखेपछि इन्फेक्सन हुने ख’तरा बढ्छ।
क्याथेटरले पेरिटोनियमलाई दु’षित बनाउन सक्ने भएकाले इन्फेक्सनको ख’तरा बढेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको मि’र्गौलाले काम गर्न छाडेपछि धापासीस्थित ग्रा’ण्डी अ’स्पतालमा तीन पटक डायलाइसिस गरिसकिएको छ। तीन दिनअघि मात्रै प्रमको मि’र्गौलाको तेस्रो डायलाइसिस गरिएको थियो। यसअघि गत कात्तिक १२, १३ र ३० गते ग्राण्डीमै हेमोडायालासिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको १२ वर्षअघि भारतरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। –रासस
Previous महिलाको इ’ज्जत दुई तिघ्रा’को बीचमा लुकेको हुन्छ डा.अरुणा
Next कोहि गरीब भोको नरहोस भनि भगवान सँग प्राथना गर्छु : हिमानी शाह https://lifenepali.com/4606/